﻿निर्माणाधीन पक्की पुल भाँच्चियो : कसरी ? «
﻿निर्माणाधीन पक्की पुल भाँच्चियो : कसरी ?
प्रकाशित मिति : २ बैशाख २०७६, सोमबार १५:२१
मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. ७ र ३ को झेंदी भन्ने स्थानमा बडीगाड खोलामाथि शुक्रवारबाट ढलान सुरु गरी अन्तिम अवस्थामा पुगेको वेला पुल एक्कासी बीचमा भाँचिएको हो ।निर्माणाधीन पक्की पुल भाँच्चिदा ५ जना घाइते भएका छन्।
दुर्घटनामा मुसिकोट नगरपालिकाका रनवहादुर कुमाल, गणेश कुमाल र रुद्रवहादुर कार्कि घाइते भएकम छन् । घाइतेहरुको इमरजेन्सी पोलिक्लिनिक हटियामा उपचार भइरहेको छ । घाइतेहरु मध्ये निर्माण व्यावसायी समेत रहेका ऋषिराम इटनी काठमाडौं र बडिगाड गाउँपालिका २ का तुलवहादुर रानालाई पोखरा रिफर गर्ने तयारी भएको छ।
५५ मिटर लामो पक्की पुल ५ करोड लागतमा निर्माणाधीन रहेको मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. ७ का अध्यक्ष प्रकाश काफ्लेले जानकारी दिए । इन्जिनियरिङ त्रुटिकै कारण दुर्घटना भएको हुनसक्ने उनले आशंका छ । जयवुद्ध कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंले पुल निर्माण गरिरहेको थियो । गत वर्ष सोही स्थानमा रहेको झोलुंगे पुल भत्किएपछि पक्की पुलको निर्माण थालिएको थियो ।